Catskills Barn Apt kwi 34 acre Estate Estate MTN izimvo
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguEdena
Ngaphambi kokuba ubhukishe okanye ubuze
*NCEDA UFUNDE * Uluhlu LONKE ngokukodwa "UKUFIKELELA KWENKENDE / UKUDLALELANA" ngolwazi oluthe kratya malunga nePropati kunye neTub eshushu (ufikelelo kwabelwana ngalo).
IMonroe House Barn Apt ibekwe kude phakathi kweNdlu yethu eyiNtloko kunye neKhabhinethi yeeNdwendwe kwindawo yethu entle eyi-34 yeehektare. Iindwendwe ziya kuba *ukufikelela okwabelwana ngazo* kwi-Hot Tub yethu enemibono emangalisayo yeentaba zekati.
AKUKHO IZILWANYANA ZOKUFUYWA KWALO NALUPHI uhlobo okanye ubungakanani
Kwindawo yeendwendwe zingaya kuhlola / zikhwele iihektare zethu ezingama-34, zidlale ichess ebaleni, ziphumle kwi-hammock, zifunde incwadi phantsi komthi wethu wama-apile, okanye zingene kwibhafu eshushu kwaye zonwabele iimbono ezibanzi.
Undwendwe lunokuphonononga iivenkile, iindawo zokutyela kunye nemisitho yeedolophu ezikufutshane zase-delhi, e-andes, e-bovina okanye e-bloomville.
E-Downsville, kukho ukukhwela iphenyane / ukuloba kwi-Pepacton Reservoir kunye ne-Kayaking phantsi kwe-brand yasempuma ye-Delaware evela kwi-Al's Sporting Goods.
Iholo yodumo ye-Cooperstown baseball imalunga ne-40min yokuqhuba imbonakalo yendawo.
Ebusika, kukho ukushukuma kwekhephu, ukutyibilika kunye nekhephu ityhubhu ePlattekill, Belleayre okanye iWindham Mountain nganye malunga ne-45min-1hr drive.
14-20mins ukuya eDelhi okanye kwi-Oneonta
40mins ukusuka eDownsville / ePepacton Reservoir okanye eCooperstown.
Idolophu yaseQuaint Country eyaziwa ngeenduli zayo eziqengqelekayo kunye neefama zobisi.
Umbuki zindwendwe ngu- Edena
Born and raised Brooklynite. Mom to the sweetest 11 yo, our GSP pup and two cats. Love travel, the beach, pizza and being an airbnb host in the catskill mountains.
Umnini wepropathi uhlala kwindawo eMain House kodwa iindwendwe zingonwabela ubumfihlo obugcweleyo berenti ngonxibelelwano oluncinci oluvela kumniniyo kangangoko kunokwenzeka. Ezinye iindawo zaNgaphandle kwabelwana ngazo nomnini kunye nezinye iindwendwe. Silungelelanisa ixesha le-tub eshushu ukuqinisekisa ukuba iindwendwe ziyalonwabela ixesha lazo labucala kwaye azinxibelelani nezinye iindwendwe.
Sinobuhlobo kakhulu 70lb German shorthaired pointer kwisiza. Unokumbona ezula-zula kwipropati okanye edlala emahlathini.
Sifuna ukuba iindwendwe zethu zibe nobumfihlo obuninzi kangangoko kodwa sihlala sifumaneka kwisiza okanye ngetekisi, i-imeyile okanye ngefowuni njengoko kufuneka.
Iindwendwe zinokunxibelelana kancinci okanye kangangoko zithanda nathi kunye nezinye iindwendwe ezinokuba kwiKhabhinethi okanye kwiNdlu eyiNtloko.
Sifuna ukonwabele ukuhlala kwakho kwaye siya kwenza zonke iinzame zokukwenza ukhululeke kangangoko kunokwenzeka.
Umnini wepropathi uhlala kwindawo eMain House kodwa iindwendwe zingonwabela ubumfihlo obugcweleyo berenti ngonxibelelwano oluncinci oluvela kumniniyo kangangoko kunokwenzeka. Eziny…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Delhi